Budata The Lord of the Rings: Rise to War APK maka Android
Budata The Lord of the Rings: Rise to War
Free Budata maka Android (1843.20 MB)
Budata The Lord of the Rings: Rise to War,
Onyenwe nke Mgbaaka: Bilie na -alụ agha bụ egwuregwu ekwentị mkpanaaka na usoro nke Lord of Rings, nke Netease Games mepụtara.
Download Onye nwe mgbaaka: bilie ịlụ agha
Akụkọ ihe mere eme nke ndị mgbe ochie, ma ịhụnanya, enyi ma ọ bụ otuto, bụ ihe mgbe ochie. Agha ọhụrụ nke mgbanaka na-abịa, akara aka nke Middle-earth dị ugbu a naka gị. Ike ọchịchịrị a na-apụghị ịgbagha agbagha na-eto ma na-abanye na Middle-ụwa niile. Site na Minas Tirith ruo Ugwu Doom, otu ọ bụla na-achọsi ike ịchịkwa otu mgbanaka wee chịa Middle-ụwa ruo mgbe ebighị ebi. Otu mgbanaka ịchị ha niile!
Nweta agha nke mgbanaka: Otu mgbanaka apụtala ọzọ na nnukwu ụlọ ezinaụlọ nke Dol Guldur. Mgbanaka ahụ na-enye onye na-eburu ya ike na-enweghị atụ ka ọ na-achị Middle-earth, na-adọta ndị otu niile na nnukwu agha.
Wulite mmezi siri ike: akụrụngwa mmezi gị na -ekpebi ịdị irè nke atụmatụ gị. Ụlọ ọ bụla na -arụ ọrụ nụzọ pụrụ iche, ike gị na -abawanye ka mmezi gị na -agbanwe.
Kpọkọtanụ ndị agha dị egwu: Site na ndị ube, ndị na -agba ụta na ndị knights ruo nihe ndị dị egwu na anụ ọhịa dị egwu, a ga -akpọrịrị ike niile tupu agha amalite. Ọ bụrụ na atụmatụ gị siri ike ma ike gị dị ukwuu, mmeri ga -abụ nke gị.
Zụlite ọbụbụenyi gị: Dịka onye na-achị Middle-earth, ị ga-abanye nime ụwa buru ibu wee chịkwaa site nịkwalite mmezi gị, gbasaa mpaghara gị, na guzobe òtù ụmụnna gị. Nnukwu ihe ịma aka na -echere gị.
Gbasaa mpaghara otu: Mụbaa ike gị site na iwebata ndị agha njem, ịgbasa ókèala, ịnakọta akụ bara uru na ịchụpụ ndị iro noge oge niile. Ahụmahụ na ike ị nwetara noge mmeri ga -enyere gị aka imeri ihe mgbochi ndị ị na -atụghị anya ya.
Choputa ihe ịtụnanya nke Middle-earth: Site na ịma mma dị elu nke Minas Tirith ruo oke ụjọ nke Barad-dur, nwee ahụmịhe nke Middle-earth nke ga-akụda gị na nnukwu ụwa nke JRR mepụtara.
The Lord of the Rings: Rise to War Ụdịdị
Nha faịlụ: 1843.20 MB
Mmepụta: NetEase Games
Onyenwe nke Mgbaaka: Bilie na -alụ agha bụ egwuregwu ekwentị mkpanaaka na usoro nke Lord of Rings,...
Ndị dike nke Ọchịchịrị bụ egwuregwu igwu egwu egwuregwu ebe ị na-ahụ ihe omimi nke ọchịchịrị nke...
Nsogbu nke Clans bụ egwuregwu ịntanetị ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu dị ka APK ma ọ bụ site na...
Legide: Leggba egwuregwu bụ egwuregwu egwuregwu ebe anyị na-alụ ọgụ megide ọtụtụ ndị iro kpebisiri...
Oge Nwụrụ Anwụ bụ ngwakọta nke egwuregwu egwuregwu na-emeghere emeghe (rpg) na usoro egwuregwu dị...
Vlanahụ: Day Zero bụ egwuregwu egwuregwu nke na-apụ maka egwuregwu RPG na-agbanwe agbanwe nke ukwuu...
E nyere gị obere ọdụ na Space Station, egwuregwu nke ga-atọ ndị hụrụ oghere ma ọ bụ agha...